crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Warbixin ku saabsan Subaca iyo Soomaalida – Bisha Ramadaan. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka June 7, 2017	0 384 Views
Muqdisho (Himilonews) – Dhawaqa aad maqlaysaan waa hooris Subac oo ay wada aqrinayaan cutub ka kooban labood da’yar iyo da’dhexaad ah kaas oo habeen kasta oo bisha Soon-qaad katirsan ka dhaca xaafad kamid ah degmada Wadajir ee gobalka Banadir.
Previous: Eeyo cunay lamaanihii korsan jiray!
Next: Ey saddex sano sugayay Milkiilihiiisa aan soo noqon doonin!
Godka Madow ee Lagu Waayay Malaayiin Gabdhood oo Hindi ah